Blog | New Light Myanmar
တိရိစ္ဆာန်တွေ ကျတော့ရော ဘာလို့ အို နာ သေရတာလဲ
လူတွေက ဘုရားစကားနားမထောင်လို့ အပြစ်သားဖြစ်လာတယ် အပြစ်သားဖြစ်တော့ အိုရတယ်..နာရတယ်..သေရတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ ဆရာရှင်းပြလို့ နားလည်ပါပြီ.. နားမလည်တာက တိရိစ္ဆာန်တွေ ကျတော့ရော ဘာလို့ အိုရတာလည်း နာရတာလည်း သေရတာလည်း.. သူတို့ကလူတွေလို ဘုရားစကားကို နားမထောင်ကြတာမှ မဟုတ်တာတဲ့….ကောင်းလိုက်တဲ့မေးခွန်းဗျာ.. ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးမှ အဆင့်ရှိတယ်လို့ခေါ်တာ ဒါတောင် ဆန်းဒေးစကူလ်း ကလေးမေးတာနော်… တချို့လူကြီးတွေက အဖြေမသိတာမပြောနဲ့ မေးခွန်းမေးတာတောင်မှ ဖြောင့်ဖြောင့်မမေးတတ်ကြဘူး..သေချာဖြေပေးတော့လည်း အဖြေကိုလက်မခံပဲ ပတ်ရမ်းနေပြန်ရော….
ကဲခါတိုင်းလိုပါပဲ … အမေးရှိရင် အဖြေရှိရပါမယ်. ဒါပေမဲ့ ညာဏ်မှီဖို့လိုမယ်.. ခံယူတတ်ဖို့လိုမယ်.. ဆင်ခြင်တတ်ဖို့လိုမယ်.. ဒီလိုပြောလို့ ငါပြောသမျှခေါင်းငြိမ့် ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး.အကျိုးအကြောင်းကို ရှင်းပြတဲ့အခါ ငါလိုချင်တဲ့အဖြေမဟုတ်လို့ လက်မခံဘူးကွာ မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဆိုပြီး အကျိုးမဲ့အကြောင်းမဲ့
ငြင်းတယ်ကွာလို့ တဖက်ပိတ်အတွေးနဲ့မငြင်းနဲ့ ငြင်းမယ်ဆိုရင် အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ပြန်ငြင်းပေါ့..ဒါမှ တရားမျှမယ်လေ..
မှန်ပါတယ်..ကျမ်းစာထဲမှာလူတွေဘာကြောင့်အိုနာသေရသလည်းဆိုတာပဲပါပြီး တိရစ္ဆာန်တွေက ဘာကြောင့်အိုရသလည်း နာရသလည်းဆိုတာမပါခဲ့ဘူး…ဘာကြောင့်လည်း..ဘာကြောင့်လည်း.
ဘုရားသခင်က အရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးနောက် ၆ ရက်မြောက်နေ့မှာ ဒီလို သုံးသပ်ပြီးအလွန်ကျေနပ် အားရခဲ့ပါတယ်။
ကမ႓ာဦးကျမ်း ၁:၃၁ ဘုရားသခင် သည် မိမိဖန်ဆင်းသမျှသော အရာတို့ကို ကြည့်ရှုလျှင်၊ အလွန်ကောင်းသည်ကို မြင်တော်မူ၍ ၊ ညဦးနှင့်နံနက် သည် ဆဌမနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏။
ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူစက အရာအားလုံးဟာအလွန်ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်..ရာသီဥတုလည်းကောင်းတယ်..ကမ႓ာမြေကြီးလည်းကောင်းတယ်.လူမဆိုသေးနဲသက်ရှိသက်မဲ့သတ္တဝါအားလုံးက အစကောင်းခြင်းအဖြာဖြာနဲ့ပြည့်စုံတယ်..တိရိစ္ဆာန်အချင်းချင်းလည်း ကိုက်ဖြတ်သတ်စားခြင်းမလိုသလို လူကလည်းတိရစ္ဆာန်တွေကို သတ်စားစရာမလိုအောင်ကောင်းခြင်းအဖြာဖြာနဲ့ပြည့်နေမှာသေချာပါတယ်..နာကျင်ခြင်းမရှိ ညီးတွားခြင်းမရှိ အိုခြင်းမရှိ သေခြင်းမရှိတဲ့ ကောင်းခြင်းတွေပါ။အဲ့ဒီကာလမှာ လူအပါအဝင်အားလုံးသောသက်ရှိသတ္တဝါအားလုံးဟာ […]
ဖန်ဆင်းခြင်း ေန ့ရက်များ
ဖန်ဆင်းရှင်သည် ဤကမ္ဘာကို (၆)ရက် ဖန်ဆင်း တစ်ရက် နားခဲ့ပါက အနန္တစကြဝဠာကို ရက်ကု ေဋ ခုနှစ်သန်း တစ်သိန်း ဖန်ဆင်း ရလိမ့်မည် ဟုတ်ပါသလား။ သိပ္ပံသည်သာအမှန်ဆိုလိုဟန်ရှိသည်။ သို့သော် သိပ္ပံသည်ကား ယ ေန့ထက်တိုင် “ဤအရာကား ထာဝရ အမှန်တရား” ဟု သိပ္ပံပညာရှင် များကိုယ် တိုင်မှပင်လျှင် မကြွေးကြော်ထားပါ။ ယ ေန ့တွေ့ရှိ ေသာ အမှန်တရားသည်၊ ေနာင်တစ်ခုပေါ်လာေသာအခါတွင် ထိုအသစ်ကိုသာ ကိုင်ဆွဲလျှက် ကျင့်သုံး ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် သိပ္ပံပညာရှင်တို့၏ နှစ်ပေါင်း သန်းပေါင်း ေလး ေထာင့်ငါးရာ အထက်မှာရှိ သည်ဟုသုတေသနပြုပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ဆိုေသာလည်း၊
လုံးဝ(လုံးဝ)ဆိုကာမျှဖြင့် ကျမ်းစာ အမှားဟု သတ်မှတ်ရန်မရှိနိုင်။ အကြောင်းမှာဘုရားသခင့် ဘုန်းတော်၊ တန်ခိုး တော်နှင့်အကြံအစည်တော်များကို ကနဦး လူသားအာဒံကို ဖန်ဆင်းရာ၌ တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသားအားလုံးကို ဖန်ဆင်းချိန်တွင်ဩပပါတိ ကအသွင်ဖြင့် အရွယ် ေရာက်ပြီးသား ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ကို မ ေမ့အပ်။
အ ကြောင်းမှာ အာဒံလူဖြစ်လာသည်နှင့် အရွယ် ေရာက်ပြီးအဖြစ်ကို ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်း ေပးခဲ့သည်။ ထိုမျှ […]